करीराचा स of्कटको करीव करीव १० व्यक्तिगत वाक्यांशहरू - जिओफुमाडास
लगभग catracha संकटको 10 एकल वाक्यांशहरू
जुलाई, 2009 राजनीति र लोकतन्त्रको
... हातमा दुई वटा चुन्च दिने पछि, मैले स्वीकार्दै कि मैले सपना देखेको थिएन।
... होन्डुरस भने अस्वीकार गर्यो OAS पत्र तुरुन्त प्रभाव संग, र OAS हन्डुरस एक्स्पेल, हावा मा Zelaya छ?
... शहरहरु मा धेरै निकारागुवाहरु र भेनेजुएलान्स; केहि तिनीहरू माथि छन्।
... केहि अर्ध अप्रचलित छन्, उनीहरूले रेडियो भिन्सेमोमोको प्रतिकृतिको बारेमा कुरा गरे र कालो मार्केटमा हवाई फोटोग्राफहरू भेट्टाए, उनीहरूलाई बताए कि इन्टरनेट र गुगल अर्थको साथ यो अब आवश्यक छैन।
... त्यो विस्फोट, यस वर्ष Honduras OAS मा क्यूबा को दण्ड हटाइएको थियो हटाइएको थियो, र यो देश निलम्बन गरिएको थियो।
... जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका आज आफ्नो आजादी 233 मनािन्छ, हन्डुरस विश्व विश्वव्यापी जीता।
... भयानक, आज त्यहाँ चावेजको आक्रमण हुन सक्छ र सम्पूर्ण संसारले उहाँलाई प्रशंसा गर्नेछ।
… जब म छैठी कक्षामा थिएँ, र हामी शिक्षकको गुनासो लिएर आएका थियौं किनभने कसैले हामीलाई कुट्यो, उनी सधैँ भन्छिन्: “मलाई तिम्रो रगत देखाउनुहोस्”। त्यसोभए यदि राष्ट्रपति कोस्टारिकामा बन्नी पजामासँग हौं भने, कुनै वारपार हुँदैन?
... पूँजीवादको मध्यस्थतामा पर्ने, चाभिज्मोको आक्रमण वा सानो चासो समूहको जटिलता बीचमा ... तपाईंलाई अर्को रेस्टुरेन्टमा खान जान मन लाग्छ। भोकले छ महिना प्रतीक्षा गर्न सक्दछ, दबाव, जो थाहा छ।
... यो सबैको लागि, यदि म यी दुई बिदाहरूसँग सहमत हुनुहुन्न भने, के म एक मान्छे बन्न सक्छु? किनकी तिनीहरू दुवै भनिन्छ कसरी।
यो पोलच, यदि त्यो प्रसिद्ध भएमा, उनीहरूले डेमोक्रेसीको गठबन्धनका सभाहरूमा गाउछन् र उनीहरूले कोइराला विरुद्ध ला रिसेस्टेन्सियासँग जीवन बिताउँछन्।
... जब शहरले यो थाहा पाउँछ कि यो एमटीएक्सएनमएक्सडा खाएर जारी राख्छ, पोलहरू परिवर्तन हुनेछन्, र त्यसो गर्दा उनीहरुले थोरै सम्म जारी राख्न सक्दछन्।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो होन्डुरसले तेस्रो विकल्प रोजेका छन
अर्को पोस्ट PhotoModeler, वास्तविक संसार को माप र मोडेलिंगअर्को »
Rep को जवाफ "क्याराचा संकटको लगभग १० व्यक्तिगत वाक्यांश"
मेरो प्रिय एनरिक, व्यापारद्वारा राजनीतिज्ञहरू (किनभने राजनीति आफै खराब छैन) देशले एक बेरेनजेन्जलमा राख्नुभएको छ, जुन अब कसरी सबै भन्दा कम विचार छैन कि कसरी बाहिर जान्छ।
सबै कुरा शक्तिमा रुचिमा संक्षेप गरिएको छ, यो आबादीद्वारा मान्यता प्राप्त छ, (यद्यपि सबै खराब छैन), दुवै पक्षमा केही स्वास्थ्य अवस्थाहरूसँग धेरै ब्लकहरू छन्।
... अस्पष्टता राम्रो हुन सक्छ, जबसम्म त्यहाँ विजेता छैन। यो मेरो लागि काम गर्दछ किनकि मसँग धेरै निराशावादी आशावाद छ; म विश्वस्त छु कि नयाँ नेतृत्व उदय हुनै पर्छ।
म महिनाको एक जोडी को लागि आफ्नो ब्लग पढ्न र म सफ्टवेयर र नक्सा व्यवस्थापन आफ्नो कौशल प्रशंसा गर्नुभएको छ। अब तपाईं आफ्नो राष्ट्र सामना समस्याको आफ्नो स्थिति छानबीन मौका गर्नुभएको, म आफ्नो बौद्धिक क्षमता पनि धेरै (हुनत अचम्मको छैन, दिइएको तपाईं ब्लग लिन रूपमा) पराउँछु।
एकल वाक्यांशहरूको सन्दर्भमा। जोर! अस्पष्टता एक परिस्थिति हो जुन हामीलाई संकटको बारेमा अन्तिम स्थानहरू विभाजन गर्न उत्प्रेरित गर्दछ र यसले हाम्रो विरुद्धमा वा पछि लाग्न सक्छ।
हामी आफैंलाई अपोलिटिकल भन्छौं (मैले आफूलाई समावेश गरेको छु किनकि म एक सचेत टेक्नोक्रेट हुनबाट ग्रस्त छु, अर्थात्, म केवल त्यस्तो राजनीतिज्ञहरूमा विश्वास गर्दछु जसले आफ्नो काम समाजको लागि राम्रो गर्छन, चाहे म समाजले के चाहान्छु भनेर स्पष्ट छैन) us र हामीमध्ये धेरैले बाहिर पार गरेका छौं। जो पक्षमा छन् उनीहरूको पक्षमा छ र जो पक्षमा छन्। तर चीजहरू यस्तो तरिकाले हेर्ने तरिका हो कि उनीहरूले हामीलाई बाँच्न र उत्तम रूपमा बाँच्न दिन सके कि धेरै कट्टरपन्थीहरू र विचारधाराहरू टाउकोमा फिट हुँदैनन् र "जनता" जान्नमा कम रुचि राख्छन्।
समाप्त गर्न, किनकि मेरो विचारलाई सही छ भनेर छलफल गर्ने छैन, म तपाईंलाई अर्को रोचक प्रश्नहरू छोड्छु:
यदि सबै कानूनी ढाँचा अन्तर्गत छ भने, किन बन्द मिडिया, ऊर्जा र इन्टरनेट काटेर राजनीतिज्ञहरूलाई पछ्याउन र विस्थापित अध्यक्ष पठाइयो? सामान्यतया कसैले कसैलाई जबरजस्ती गर्दा तिनीहरूले उसलाई लिन्छन् र उहाँलाई ताला लगाउँछन्, उनीहरूलाई सीधा निर्वासन गर्दैनन्।
त्यसोभए, यदि साँच्चिकै एक गिरफ्तारी वारंट थियो भने, उनीहरूले केटालाई विमानबाट उठाउन र जेलमा राखे? सम्भवतः यो अन्य राष्ट्रपतिहरूको साथ आयो यो गर्न सकिएन। त्यसपछि, किन सेट सेट अप? तिनीहरूले एयर स्पेस, अवधि बन्द गर्दथ्यो।
यसले मलाई उनीहरूको जीवनको शुरुवात गर्ने स्थितिलाई जान्न धेरै सताउँछ र मलाई सन्देशको बारेमा चिन्तित छ जुन शक्तिका समूहहरू (दाहिने भनिन्छ) पठाउँछ। यो देखिन्छ कि एक पटक तपाईंले सशस्त्र सेनाहरूको नियन्त्रण गरिरहनु भएको छ, बाकीले तिमीलाई लापरवाही गर्नुपर्छ। कुल, यदि कसैले यसलाई मन पराउँदैन भने, तपाईं यसलाई लिन सक्नुहुनेछ वा यसलाई मार्न सक्नुहुनेछ।
अर्कोतर्फ: यी पावर समूहहरू साँच्चै अवस्थित छन्? वा केवल धेरै टाउको सँगै आउनुभयो र एक पुरानो बजार मुकदमा पछि राष्ट्रपतिलाई परास्त गर्न समेटियो।
यस असफलता: जेलेआको "लोकप्रिय सर्वेक्षण" लाई अनुमति दिइने थियो र ती परिणामहरूको आधारमा, बलपूर्वक अधिग्रहण स्थगित भएको भए के हुने थियो? म कल्पना गर्न रुचाउँदिन।
सैन्य वा सशस्त्र पुलिसको साथ नागरिक भ्यानहरू वा "सेना" - वा जे पनि उनीहरुलाई तिनीहरु बोले पनि - अनुहार ढाकिएको होण्डुरसमा टिभीमा देखिन्छ।
म आशा गर्दछु कि मानिसहरूलाई थाहा छ यो कसको गल्ती हो। न चाभेज, न ओएएस, न कसैले बाहेक ... जो "चार्ज" छन् उनीहरूले चार्ज लिन र ग्रहण गर्न दिनुहोस् - भविष्यमा - उनीहरूको कार्यको लागि सबै जिम्मेवार। बाहिरबाट कुनै सेनाले कसैलाई आक्रमण गर्न गइरहेको छैन। होन्डुरस - मेरो विचारमा - पहिले नै आक्रमण गरीरहेको छ र होन्डुरन्स आफैंबाट। यो दुखलाग्दो कुरा हो। शुभकामना, साँच्चै। आशा छ कि के म यी केसहरु मा निम्नानुसार लाग्छ आउँदैन। यदि कसैले सोधे कि म के सोच्दै छु, यहाँ सूची छ:
- हिंसा, भय, मृत्यु, बेपत्तापन, मानव अधिकार उल्लlations्घन, देशको bण tedण, आर्थिक एकाग्रता, निजी debtण जुन राष्ट्रियकरण गरिएको छ, उत्तर अमेरिकी एकाधिकारको एक जोडीको प्रवेश, सार्वजनिक कम्पनीको "बिक्री", शिक्षाको अनिश्चितता, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक र सार्वजनिक सेवाहरू, सेन्सरशिप, मिडिया नियन्त्रण, सामाजिक नियन्त्रण।
मलाई आशा छ कि म गलत छु ...